Waa maxay, sidee loo sameeyay iyo maxay yihiin isticmaalka saliida | Cusbooneysiinta Cagaaran
Waa maxay, sida loo sameeyay iyo maxay yihiin isticmaalka saliida
Jarmal Portillo | | Tamarta Caadiga ah
Saliidu waa qayb ka mid ah nolosheena. Labadaba jiilka tamarta iyo shidaalka dhammaan noocyada gawaarida, aaladaha, iwm. Iyo sameynta caagagga. Waa dhismo ku dhex jira waxyaabo badan oo nolol maalmeedkeenna ka badan inta aan ka fikirno. Si kastaba ha noqotee, miyaan ognahay waa maxay saliid? Maqaalkan waxaan ku sheegaynaa wax walba oo ku saabsan saliida sida ay tahay ilaa sida ay u sameysan tahay iyo waxa ay u isticmaasho bulshada dhexdeeda.
Ma rabtaa inaad wax badan ka ogaato? Sii wad akhriska maxaa yeelay wax walba waan kuu sheegeynaa 🙂
1 Waa maxay sideese loo sameeyaa saliidda?
2 Saliida ceyriin
3 Isticmaalka ugu weyn
Waa maxay sideese loo sameeyaa saliidda?
Waa saliid macdan ah oo leh midab madow ama mid aad u madow. Waxay leedahay cufnaan ka hooseysa tan biyaha oo sidaas darteed, marka musiibo sida Sharafta oo kale dhacdo, saliidu wali waxay dul sabeyneysaa biyaha. Waxay leedahay ur dabeecad leh oo hubaal ah inay soo jiidaneyso wax ka badan hal. Waxay ka kooban tahay iskudhaf hydrocarbons ah oo leh oksijiin, nitrogen iyo baaruud qadar kala duwan leh. Dhismahan waxaa laga helaa oo keliya dhagxaanta dhagaxa ah tan iyo markii ay samaysantay halkaas.
Waxaa lagu sameeyaa alaabta ceyriinka ah ee ka kooban haraaga noolaha loo qaybiyay dadka ku nool biyaha, dhulka iyo dhirta. Dhammaan xayawaanadan iyo dhirta dhimatay waxay ka tegayeen halabuurkooda iyo liiditaankooda iyagoo keenaya waxa aan maanta u naqaano saliid ahaan. Hadhaaga noolaha waxaa soo weeraray ficil bakteeriyada anaerobic-ka ah oo baabi'isay oksijiintii oo dhan una reebtay kaliya kaarboon iyo hiddo-wadayaal jira. Tani waa sababta ay uga kooban tahay kaliya hydrocarbons.
Cadaadiska ay keeneen faleebo oo ka hooseeya lakabyada hoose ee Dhulka ayaa sababa cayrinta dhammaan dareeraha ku jira lakabyada ay ku yaalliin dhagxaanta dhoobada ah. Dareerahan waa waxa aan u naqaano saliid ahaan. Ka dib ficilka iyo cadaadiska dhagxaanta dhagaxa, waxay awood u leedahay inay ku safarto tobanaan kiilomitir oo dhaadhac ah oo ay ka hesho dhagxan god ah oo ay ka gasho godadka. Dhagaxan dhagaxa ah ee dareeraha lagu keydiyo laguna keydiyo waxaa la yiraahdaa kaydinta dhagaxa.
Waxay ka timid dhagaxan keydka ah halkaas oo laga soo saaro dhammaan waxa loogu yeero saliidda ceyriin.
Dhismahan aan ugu yeerno saliida ceyriin waa iskudhaf hydrocarbons iyo noocyo kale oo leh ilaa 40 atamyo kaarboon ah. Hydrocarbon-ka ugu fudud ee ay ka samaysan tahay waa methane, oo ka kooban hal kaarboon iyo afar atam oo haydarojiin ah. Ceyriin sida laga soo saaray dhagaxa bakhaarka Ma laha warshad ama shidaal isticmaal. Waa lagama maarmaan in la mariyo habka turxaan bixinta. Sifada ugu badan ee lagu garto saliida ceyriin waa tamarta ay ka kooban tahay.
Sifeyntu waa hawlgal ka kooban jajabka jajabka dhammaan walxaha. Thanks to nidaamkan, alaabooyin kala duwan ayaa la heli karaa, iyadoo kuxiran heerkulka lagu sameeyay. Tusaale ahaan, qaar ka mid ah badeecadaha laga helay heerkullo kala duwan ayaa ah ethane, methane, butane, propane, kuwaas oo ay ku jiraan gaas; waxyaabaha dareeraha ah sida baatroolka, saliida shidaalka iyo gaaska; iyo walxaha adag sida daamurka iyo paraffin.
Dhammaan alaabooyinka waa in lagu hayaa heerkullo kala duwan soo-saarkooda. Sidaas darteed, Saliidu wax yar ayay isticmaashaa, maahan oo kaliya warshadaha tamarta, laakiin sidoo kale warshadaha kiimikada.
Si aan wax saameyn ah oo xagga deegaanka ah ugu yeelan magaalooyinka ama bay'adaha dabiiciga ah, meelaha laga soo saaro iyo goobaha saliidda laga soo saaro waxay ku yaalliin meelo ka fog meelaha lagu cuno. Saliida ceyriin waxaa lagu daabulaa mahadnaqa dhismaha dhuumaha oo ku yaalo ceelka halka laga soo saaro sifeynta ugu dhow. Waxaa jira waqtiyo ay tahay in cayriin lagu qaado badda. Xilliyadaas, booyadaha ama booyadaha saliidda ayaa la adeegsadaa.
Ku soo raridda walxahaas badda dhexdeeda waxay sababi kartaa masiibooyinka qaarkood shilalka awgood. Ka soo qaad in markab sida shixnad ceyri ah uu dhagax ku dhacay saliiddiina la siidaayay. Saameynta deegaanka ee ay ku yeelato badda waa mid aad u weyn. Waxay saameyn ku yeelan doontaa tayada biyaha iyo noolaha ku nool aaggaas.
Maadaama saliidu ay leedahay badeecooyin badan oo kuxiran heerkulka uu ku sifoobay, sidoo kale waxaa jira adeegsiyo badan oo ay yeelan karaan. Isticmaalka ugu horeeya waa shidaalka gudaha ama warshadaha. Kaas oo aan ku haysan dhalo butane ah guriga ama isticmaalay nooc ka mid ah foornada wax lagu karsado.
Isticmaal kale waa sida shidaalka iyo saliida. Inta badan ee shidaalka foosha dhammaan gawaarida adduunka waxaa laga sameeyaa saliid. Waxay kuxirantahay nooca gawaarida iyo mishiinka, mid sifeeyay ama mid kale ayaa loo sameeyay si loogu adeego meelo kala duwan.
Saliida sidoo kale waxaa loo isticmaalaa sida alaabta ceeriin ee aasaasiga ah ee warshadaha shidaalka. Waa aasaaska dhammaan badeecooyinka caagga ah ee adduunka ka jira. Bacaha balaastigga ah waxaa laga sameeyaa batroolka. Waxaa intaa dheer, nooc kasta oo caag ah wuxuu ka yimaadaa saliid.
Si loo qanciyo baahida suuqa, farsamooyinka qaar ayaa la hirgeliyey kuwaas oo gacan ka geysta beddelidda qaab-dhismeedyada wax soo saarka badan ee la helay intii lagu jiray sifaynta si noocyada kale ee maaddooyinka ay bulshadu u badan tahay loo heli karo. Si wax looga beddelo alaabtan waxaan helnaa farsamooyin ay ka mid yihiin dildilaaca iyo polymerization.
Marka la jajabayo waxaa suurtagal ah in la jebiyo molecule culus oo leh atamyo badan oo kaarboon ah isla markaana la sameeyo maaddooyinka fudud. Tusaale ahaan, saliida shidaalka noocyada kale ee gaasaska iyo baatroolka ayaa laga heli karaa. Dhinaca kale, iyada oo loo marayo polymerization, dhowr meco oo laga helo dhisme ka fudud oo loo yaqaan monomer ayaa lagu biiri karaa si loo sameeyo molecules aad u adag oo waaweyn oo loo yaqaan polymer. Waxaan leenahay tusaale ahaan ethylene si loo sameeyo polyetylen. Polyetylen waa maadada tetrabricks.
Waxaan rajeynayaa in xogtaan aad waxbadan uga ogaato saliida iyo dhamaan isticmaalkeeda dhanka warshadaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta Caadiga ah » Waa maxay, sida loo sameeyay iyo maxay yihiin isticmaalka saliida
Marawaxadaha dabaysha ee guriga lagu sameeyo